Askari dil geystay oo ay Maxkamadda Ciidamada Xukuntay – Radio Muqdisho
Askari dil geystay oo ay Maxkamadda Ciidamada Xukuntay
Muqdisho- 07/08/2018 ayaa la soo gaba-gabeeyay Maxkamadeynta Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo loo heysto dilka AUN Marxuum Xasan Abshir Warsame oo ka dhacay magaalada Beladweyn 07/02/2018.
Wixii xilligaas ka dambeeyay ayuu Yariisow isaga soo baxsaday halka uu dilka ka geystay ee aheyd degmada Beledweyn ee xarunta gobalka Hiiraan, isagoo soo gaaray magaalada Muqdisho.
07/07/2018 ayuu isku dayay in u iska diiwaan geliyo dugsiga tababarka Boliiska ee Jeneraal Kaahiye xilligaasi uu ku dadaalayay badalka magiciisa iyo ku biiristiisa balse ciidamada boliiska oo haayay xogta Yariisow ayaa gacanta ku soo dhigay iyagoo ku wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida.
Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa ka tirsanaa Ciidamada Xoogga dalka gaar ahaan qeybta 27-aad ee ka howlgasha deeganada maamulka Hirshabelle.
Gaashaanle Dhexe Xasan Cabdiraxmaan Aadan Wabiyow oo kamid ah Garsoorayasha Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa u sheegay Garsoor in Cabdiraxmaan Cumar Cismaan go’aankiisa loo tiiriyay Qiraalkiisa oo ahaa in ay kaga fakatay xabad Marxuumka , Markaatiyaal goob joog u ahaa dilka weliba cadeeyay in uusan wax gar-gaar ah u fidin kadib dilka balse uu baxsaday iyo doodii qareenada ee aheyd in loo naxariisto loona fududeeyo ciqaabta maadaama uu qirsan-yahay, waxa ayna Garsoorayaasha gaareen in Ex Dable Cabdiraxmaan Cumar Cismaan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, Sidaasna loogu xukumay dil toogasha ah
Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa heysta fursad kale uu ku dalban karo rafcaan hadii uusan ku qancin Xukunka Maxkamadda Darajada Koowaad.
Amiirka Qatar oo $15bilyan Maalgashi ugu deeqay Turkiga
Madaxweynaha JFS iyo Wafdi uu horkacayo oo dalka Jabuuti lagu soo dhaweeyey